carbon ígwè square & rektangulu anwụrụ mbukota igwe si Teneng HGF200 - China Shijiazhuang Teneng
Slitting Line & Cut Iji Ogologo Line
Oyi Roll akpụ Mill
Automatic mbukota Machine
Akwụsị Ihu & Chamfering Machine
Carbon ígwè eriri igwe gburugburu accumulator HT76
carbon ígwè square & rektangulu anwụrụ mbukota mac ...
HGF200 carbon ígwè square & rektangulu anwụrụ mkpọ ...
Carbon ígwè eriri igwe Hydraulic abụọ-cone uncoiler bú ...
ZJ1800 Slitting igwe
Carbon ígwè anwụrụ akwụsị Ihu & Chamfering Machin ...
carbon ígwè square & rektangulu anwụrụ mbukota igwe si Teneng HGF200
Brief Introduction The igwe na-eji tojupụtara na abịa okokụre ngwaahịa na anwụrụ mmepụta akara. Enweghị akwụkwọ ntuziaka ọrụ, na igwe-agba na-akpaghị aka, na mma mmepụta arụmọrụ a otutu. Ọ eliminates na-akụ aka mkpọtụ, mmebi, na nchekwa na-ezo ihe ize ndụ, na mma na ngwaahịa mma na lowers ala mmepụta na-eri. Izute anụ ụlọ mkpa na akpaaka nke anwụrụ mmepụta akara, anyị na-etinye obi ha dum na ike mgbe nke esenidụt ngwá na ịzụlite ya innova ...
FOB Price: US $ 80000-100000 / Ibe
Tụkwasịnụ Ikike: 5-7 tent
Port: Tianjin mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri
The igwe na-eji tojupụtara na abịa okokụre ngwaahịa na anwụrụ mmepụta akara. Enweghị akwụkwọ ntuziaka ọrụ, na igwe-agba na-akpaghị aka, na mma mmepụta arụmọrụ a otutu. Ọ eliminates na-akụ aka mkpọtụ, mmebi, na nchekwa na-ezo ihe ize ndụ, na mma na ngwaahịa mma na lowers ala mmepụta na-eri.
Izute anụ ụlọ mkpa na akpaaka nke anwụrụ mmepụta akara, anyị na-etinye obi ha dum na ike mgbe nke esenidụt ngwá na ịzụlite ya otutu. The igwe nwere àgwà nke elu technology, elu mma pụrụ ịdabere, kọmpat na ezi uche Ọdịdị, tozuru okè usoro, na-adaba adaba na ime mmezi. Jiri ya tụnyere ihe esenidụt igwe, arụmọrụ ka price ruru nke anyị igwe dị elu.
Previous: ZJ1250 ígwè eriri igwe Slitting igwe
DB127 Automatic ígwè gburugburu & square anwụrụ p ...
Now anwụrụ mbukota igwe
Ọkara akpaaka anwụrụ mbukota igwe
Steel Now anwụrụ mbukota igwe DB76
Automatic ígwè gburugburu & square anwụrụ mbukota ...
DB76 Steel Now anwụrụ mbukota igwe
Okwu: Xiushui mansion 1108, No.363 Zhonghua North Street, Xinhua Dist., Shijiazhuang, China.
Ekwentị: 86-139-3381 8089
Oriaku Selina Lee